Izinzuzo ze-Mobile Marketing Automation | Martech Zone
UMsombuluko, May 6, 2013 ISonto, May 5, 2013 UJenn Lisak Golding
Enye yezinhloso eziphezulu zezinhlangano ukuqondanisa ithimba lokumaketha nelokuthengisa ukuze bakwazi ukuxhumana nokuhlanganisa izinqubo zabo zomsebenzi ngempumelelo enkulu. Ngakolunye uhlangothi, ukumaketha kudinga umtapo wezinsizakusebenza kanye nenqubo yokukhiqiza ehamba phambili, ngenkathi ukuthengisa kudinga ukukhululeka kokuhamba nokuthengiswa kwesibambiso ezandleni zabo. Yize imisebenzi yale minyango ingahluka, isasebenzelana kakhulu. Yilapho umqondo we ezenzakalelayo ukumaketha ezishintshayo uyangena.
Sisebenze nethimba eFatstax, a uhlelo lokusebenza lokuthengisa lwe-iPad, kule infographic, enikezela izinhlangano zamabhizinisi ngohlelo lokusebenza oluvumela iqembu labo lokuthengisa ukuthi lifinyelele kalula isibambiso sokumaketha nethimba lezentengiso ukuthi likwazi ukulilayisha endaweni eyodwa, njengendawo yokugcina izinto. Uhlelo lokusebenza libuye luhlangane nezinhlelo zeCRM, ukuze ukwazi ukuqala kalula ukunakekela imikhondo bese uthwebula imininingwane eminingi ngemikhombandlela. Umqondo ngukunikeza iqembu lokuthengisa ukuhamba kwebhizinisi, ngokukwazi ukuthumela kalula izethulo, amaphepha amhlophe, ama-infographics, njll kumathemba abo ngesikhathi somhlangano wokuthengisa, futhi ukumaketha kunganikeza ukuthengisa ngezinhlobo zokuqukethwe ababelana ngakho ku-inthanethi. Womabili amaqembu ayaziswa ngalokho okwabiwayo nokuthi yini okutholakalayo, okuqhuba ukuxhumana okungcono ngaphakathi kwenkampani kanye namathemba.
Le infographic igxumela kulokho okuzenzakalelayo ukumaketha kwamaselula nokuthi kungashintsha kanjani indlela inhlangano yakho esondela ngayo kumijikelezo yokuthengisa nokumaketha. Ibuye inikeze ngosizo lwe "real-time" ngesikhathi senqubo yokuthengisa. Ubungeke yini uthande ukube unikezwe imininingwane kungakapheli nemizuzu eminingi uyicelile? Yilokhu okwenzelwa ukumaketha okuzenzakalelayo.
Ngabe usebenzisa noma yiluphi uhlobo lwezinhlelo zokusebenza zokuthengisa ukuthuthukisa ukusebenza kwakho kokuthengisa? Uma kunjalo, ziyini? Wake wakuzwa okufana nalokhu phambilini? Ngabe usebenza kanjani maqondana "nokuhamba kwamabhizinisi?"
Tags: ukuvumelanisa ukuthengisa nokumakethaiqembu lokumakethaezenzakalelayo ukumaketha ezishintshayoUkunika Amandla Ukuthengisa
May 24, 2013 ku-3: 30 AM